ဆေးကျောင်းသားကျောင်းသားများအကြားအင်တာနက်စွဲလမ်းမှုပျံ့နှံ့မှု - အီရန်အနောက်တောင်ပိုင်းမှလေ့လာမှုတစ်ခု (၂၀၁၉၉) - Your Brain On Porn
ဆေးကျောင်းသားကျောင်းသားများအကြားအင်တာနက်စွဲလမ်းမှုပျံ့နှံ့မှု - အီရန်အနောက်တောင်ပိုင်းမှလေ့လာမှုတစ်ခု (၂၀၁၉၉)
Cent က EUR J ကိုပြည်သူ့ကျန်းမာရေး။ 2019 Dec;27(4):326-329. doi: 10.21101/cejph.a5171.
Sayyah အမ်1, Khanafereh S က2.
ယနေ့ခေတ်တွင်အကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိနေသော်လည်းကွန်ပျူတာနည်းပညာ ၀ ယ်လိုအားမြင့်တက်လာခြင်းနှင့်ကျယ်ပြန့်သောအင်တာနက်နည်းပညာလွှမ်းမိုးမှုများရှိသော်လည်းလူအများစုအထူးသဖြင့်ကျောင်းသားများသည်အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုကြောင့်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့်လူမှုဆက်ဆံရေးအားနည်းခြင်းများကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ ထို့ကြောင့်၊ အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုနယ်ပယ်၌လေ့လာမှုများ၏ဆန့်ကျင်ဖက်ရလဒ်များနှင့်စပ်လျဉ်း။ ဤလေ့လာမှုသည်အင်တာနက်သိပ္ပံပညာ၏ Ahvaz Jundishapur တက္ကသိုလ်မှကျောင်းသားများအင်တာနက်စွဲလမ်းမှုနှုန်းကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်။
ဒီဖော်ပြချက်လေ့လာမှုကို Ahvaz Jundishapur ဆေးတက္ကသိုလ်သိပ္ပံတက္ကသိုလ်မှကျောင်းသားများအားပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဒေတာစုဆောင်းခြင်းမေးခွန်းလွှာနှင့်အင်တာနက်စွဲစမ်းသပ်မှု၏လူ ဦး ရေဆိုင်ရာပရိုဖိုင်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
ရလဒ်များအရတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအကြားအင်တာနက်စွဲလမ်းမှုသည်ပုံမှန်ဖြစ်သည် (t = 23.286, p <0.001) အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုသည်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအကြားတွင်သိသိသာသာကွဲပြားခြားနားပြီးအထီးအသုံးပြုသူတွင်ပိုမိုပျံ့နှံ့သည် (t = 4.351, p = 0.001) အမျိုးအစားအလိုက်အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုနှုန်းသည် ၁.၆% ပုံမှန်၊ ၄၇.၄% ပျော့၊ ၃၈.၁% အလယ်အလတ်နှင့် ၁၂.၉% ပြင်းထန်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆန်းစစ်လေ့လာမှုအရအငယ်တန်းကျောင်းသားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပြင်းထန်သောအင်တာနက်စွဲလမ်းမှု (၁၆.၄%) ရှိသည့်အကြီးတန်းကျောင်းသားများသည် proportion2 = 30.964; p <0.001) ။
ဤလေ့လာမှု၏တွေ့ရှိချက်များကို အခြေခံ၍ ဆေးကျောင်းသားများအတွက်အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုများစွာရှိသည်ဟုလေ့လာတွေ့ရှိရပြီး၊ အန္တရာယ်များနှင့်ရှုပ်ထွေးမှုများကိုကာကွယ်ရန်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်သင့်လျော်သောကုသမှုများလိုအပ်သည်ဟုကောက်ချက်ချနိုင်သည်။
သော့ချက်စာလုံးများ - အင်တာနက်စွဲလမ်းမှု၊ စိတ်ကျန်းမာရေး; တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ
Doi: 10.21101 / cejph.a5171